ESI HỌRỌ LINUX MAKA LAPTỌỌPỤ NA-ADỊGHỊ IKE - LINUX - 2020
Ndị ọrụ nke sistemụ arụmọrụ Windows nwere ike ịmepụta ngwa ngwa USB flash nwere ike iji ya na foto Ubuntu na ya. Iji mee nke a, ị nwere ike iji ngwanrọ pụrụ iche.
Iji dekọọ Ubuntu, ị ga-enwerịrị ihe oyiyi ISO nke sistemụ arụmọrụ, nke a ga-echekwa na mgbasa ozi ndị nwere ike iwepụ, yana nke onwe ya. Ọ dị mkpa ịghọta na a ga-ehichapụ data niile na mgbasa ozi USB nwere ike iji.
Otu esi emepụta ngwa USB USB nwere ike iji ya na Ubuntu
Tupu ịmepụta ngwa flash USB, nwere ike ibudata nhazi nke sistemụ arụmọrụ n'onwe ya. Anyị na-akwado ime nke a nanị na weebụsaịtị Ubuntu. Enwere uru dị ukwuu na nke a. Isi bụ na sistemụ arụmọrụ a na-ebudata agaghị emebi ma ọ bụ na-adịghị mma. Eziokwu bụ na mgbe ị na-ebudata os sitere na isi mmalite ndị ọzọ, o yikarịrị ka ị ga-ebugo ihe oyiyi nke usoro nke mmadụ na-agbanyeghachi.
Ọ bụrụ na ị nwere ngwa elekere nke ị nwere ike ihichapụ data niile na mbudatara, jiri otu n'ime ụzọ ndị edepụtara n'okpuru.
Usoro 1: UNetbootin
A na-ewere usoro a ka ọ bụrụ ihe kacha mkpa na-ede Ubuntu ka ọ bụrụ mgbasa mgbasa ozi. A na-eji ya eme ihe mgbe mgbe. Otu esi eji ya, ị nwere ike ịgụ na nkuzi ahụ maka ịmepụta ụgbọala nwere ike ịbanye (usoro 5).
Ihe omumu: Esi ike ịmepụta ngwa USB USB
N'ezie, na nkuzi a, e nwere mmemme ndị ọzọ na-enye gị ohere iji ngwa ngwa arụ ọrụ USB. UltraISO, Rufus na Universal USB Installer na-adabara ide Ubuntu. Ọ bụrụ na ị nwere ọdịyo OS ma otu n'ime mmemme ndị a, ịmepụta mgbasa ozi nwere ike ịme ka nsogbu ọ bụla nwee nsogbu.
Usoro 2: LinuxLive USB Creator
Mgbe UNetbootin gasịrị, ngwá ọrụ a bụ ihe kachasị mkpa na ebe ịdekọ ihe oyiyi nke Ubuntu na ngwa USB flash. Iji jiri ya mee ihe ndị a:
Download faịlụ ahụ, tinye ya ma wụnye ihe omume ahụ na kọmputa gị. N'okwu a, ị ga-aga usoro usoro zuru oke. Mwepụta LinuxLive USB Onye Okike.
Na ngọngọ "Point 1 ..." họrọ nnyefe a na-ewepu. Ọ bụrụ na anaghị achọpụta ya na akpaghị aka, pịa bọtịnụ mmelite (n'ụdị akara nke akụ ndị na-agbanye mgbanaka).
Pịa na akara ngosi dị n'elu ihe ntinye. "ISO / IMG / ZIP". A ga-emeghe windo nhọrọ faịlụ. Kọwaa ebe ebe onyinyo ị na-ebudatara dị. Usoro ihe omume ahụ na-enyekwa gị ohere ịkọwa CD dịka isi iyi nke onyinyo ahụ. Tụkwasị na nke a, ịnwere ike ibudata sistemụ arụmọrụ site na otu ebe Ubuntu ọrụ.
Leba anya na ngọngọ ahụ "Nkebi 4: Ntọala". Jide n'aka na ị kwanye igbe ahụ "Ịhazi USB ka FAT32". Enwere isi ihe abụọ dị na ngọngọ a, ha adịghị mkpa, n'ihi ya ị nwere ike ịhọrọ ma ị ga-akọrọ ha.
Pịa bọtịnụ bọtịnụ ịmalite ịdekọ onyinyo ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, chere na usoro ahụ ga-agwụ.
Lee kwa: Otu esi eme windo ngwa ngwa Windows XP
Point 3 na LinuxLive USB Onye kere anyị na-awụpụ ma ghara imetụ aka.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, usoro ihe omume ahụ nwere mmasị na-adọrọ mmasị na nke na-abụghị ụkpụrụ. N'ezie, nke a na-adọta. Ihe dị ezigbo mma bụ mgbakwunye nke ọkụ ọkụ ọkụ n'akụkụ ogwe ọ bụla. Mkpụrụ ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ na ya pụtara na ị mere ihe niile ziri ezi na ntụgharị ihu.
Usoro 3: Xboot
E nwere ihe ọzọ a na-enweghị mmasị na ya, "usoro a na-adịghị agbanyụ" nke na-arụ ọrụ magburu onwe ya ide ihe oyiyi Ubuntu na ngwa USB flash. Ihe bara uru ya bụ na Xboot nwere ike ịgbakwunye ọ bụghị naanị sistemụ arụmọrụ n'onwe ya, kamakwa mmemme ndị ọzọ na mgbasa ozi nwere ike ime. O nwere ike ịbụ nje virus, ụdị ọrụ niile dị iche iche na-agba ọsọ na ihe ndị yiri ya. Ná mmalite, onye ọrụ adịghị mkpa ibudata otu faịlụ ISO ma nke a bụkwa nnukwu gbakwunyere.
Iji jiri Xboot, soro usoro ndị a:
Download ma mee ihe omume ahụ. Ọ dịghị mkpa iji wụnye ya na nke a bụkwa nnukwu uru. Tupu nke a, tinye ụgbọala gị. Uzo ahu ga eji aka ya kpebie ya.
Ọ bụrụ na ị nwere ISO, pịa akara ngosi "Njikwa"na mgbe ahụ "Meghee" ma dee ụzọ nke faịlụ a.
A ga-egosi windo iji gbakwunye faịlụ na ọkwọ ụgbọala n'ọdịnihu. N'ime ya, họrọ nhọrọ "Tinye site na iji ihe oyiyi ISO Grub4dos Emulation". Pịa bọtịnụ ahụ "Tinye faịlụ a".
Ma ọ bụrụ na ibudataghị ya, họrọ ihe ahụ "Download". A na windo maka ihe oyiyi ma ọ bụ mmemme ga-emeghe. Iji dekọọ Ubuntu, họrọ "Linux - Ubuntu". Pịa bọtịnụ ahụ "Meghee Webpage". Ebe nbudata ga-emeghe. Download faịlụ site na ebe ahụ ma soro ihe omume gara aga na ndepụta a.
Mgbe faịlụ niile dị mkpa ga-abanye n'usoro ihe omume ahụ, pịa bọtịnụ ahụ "Mepụta USB".
Hapụ ihe niile dị ka ọ bụ ma pịa "OK" na windo na-esote.
Ịdekọ amalite. Naanị ị ga-eche ruo mgbe ọ gwụrụ.
Ya mere, ịmepụta ngwa USB flash nwere ike iji ihe oyiyi Ubuntu dị mfe maka ndị ọrụ Windows. Enwere ike ime nke a na nkeji ole na ole na ọbụna onye ọrụ novice nwere ike ijikwa ọrụ a.
Lee kwa: Esi ike ịmepụta flash drive USB 8
https://termotools.com ig.termotools.com © Linux 2020